PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2017-10-29 - Inkosi yamaQadi yasifaka odakeni sibhekile
Inkosi yamaQadi yasifaka odakeni sibhekile
Isolezwe ngeSonto - 2017-10-29 - IMIBONO -
kwaleli cala, kunomfundisi mumbe obekuthi uma kubuywa enkantolo asitshele ukuthi yithi ‘esihamba phambili’ zonke izinto ziyasivuna esho nokuthi ten-nil.
Kodwa namhlanje kubukeka sengathi seziyime emthumeni, akasekho manje owaziyo ukuthi sizobhekaphi uma kunje ngoba noma amajaji esigodlile isinqumo kodwa kucace bha ukuthi icala liyasilahla thina baseBuhleni. Kodwa-ke sibaningi ebesivele sibona ukuthi sizogcina sesisha nendlu.
Njengoba incwadi ka- 2 Petru
2:1 ithi kuyakuvela abefundisi bamanga abayoniphathisa okwempahla ngamazwi obuqili ngenxa yokuthanda imali befaka nezahlukaniso phakathi kwabantu. Imindeni eminingi ixabene ngenxa yabo laba ebebekhuluma lokhu nalokhu engisaba nokukusho lapha.
Eminye imizi ichithekile ngenxa yezinkulumo nezenzo zabo ezimbi.
Lapho indoda yehlukene nomkayo nezingane nabazali bayo ngenxa yalo mbango njengoba kwabona beneNkosi yamaQadi baxova leli bandla belazi iqiniso benza sengathi inkosi uThingo belunolimi oluyizimbhaxa njengolwenyoka, lwakhuluma ukukhuluma okubili.
Njengoba kuzwakala sengathi lwabhala incwadi lukhomba inkosi Imisebeyelanga njengozolandela esihlalweni sokuhola ibandla.
Lwabuye lwatshela inkosi yamaQadi ukuthi lushiya unkosana uMduduzi esihlalweni kanti uzongabi nabo ubufakazi obuphathekayo nazobubeka phambi kwenkantolo.
Engifisa ukukusho wukuthi inkosi yamaQadi izehlisile isithunzi ize iyokuma phambi kwamajaji ibukwa wumhlaba wonke ngento engekho njengoba yayizishaya isifuba ithi ‘ngisho ungangibizela enkantolo yangakini mina ngiyinkosi yesizwe samaQadi nginelungelo ngiphelele’ kanti akaphethe lutho.
Nabefundisi nabo baze bayokuma phambi kwamajaji bebonwa wumhlaba wonke ukuthi nenkinga yezikweletu bese umnotho uba ngcono,’’ kusho uRussell. bangabantu abahambisanayo nobugebengu obuhleliwe.
Hhawu hhawu hhawu, baze basifaka odakeni abantu sibethembile.
Uma kungenzeka isinqumo singasivuni kuyobanjani kubo nasenkosini yamaQadi? Ngizizwa ngidabuka ukuthi le mizi echithekile ngenxa yobuqili babo bayoyivusa kanjani, ngani futhi? Isithunzi sabo bayobuye basivuselele ngani?
Siyobuye sibethembe kanjani uma sebesho okuyiqiniso kusasa? Inhliziyo yami ibuhlungu ngenxa yalesi senzo sabo futhi siyisono esingenakuthethelelwa. NgokukaLuka 12:1 akukho okufihliwe okungeyukwambulwa.
ONGOTI bathi izinkinga zezimali nezikweletu zithuntubeza ingqondo emsebenzini, umsebenzi abe nokhwantalala. Abanye baphundulwa yithuba lokukhushulelwa esikhundleni esiphezulu ngenxa yokhwantalala Isithobme: SIGCINIWE